Tag: Kushambadzira Webinar | Martech Zone
Tag: Kushambadzira Webinar
Kutengesa Vhidhiyo Matipi kubva kuImba Hofisi
China, Kurume 26, 2020 Chipiri, Kurume 2, 2021 Douglas Karr
Nedambudziko razvino, vashandi vebhizinesi vari kuzviwana vari vega uye vachishanda kubva kumba, vachizendamira pamavideo nzira dzemisangano, mafoni ekutengesa, uye misangano yetimu. Ndiri kuzviparadzanisa kwevhiki inotevera sezvo shamwari yangu yakafumurwa kune mumwe munhu akaedzwa aine COVID-19, saka ndakafunga kuisa pamwechete matipi ekukubatsira zvirinani kuwedzera vhidhiyo seyako yekutaurirana svikiro. Kumba Hofisi Vhidhiyo Matipi Nekusava nechokwadi kwehupfumi,
Mugovera, July 14, 2018 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
BrightTALK, iyo yanga ichitsikisa webinar data rekumusoro kubvira 2010, yakaongorora anopfuura 14,000 webinars, mazana emamirioni emaimeri, chikafu uye kukwidziridzwa munharaunda, uye huwandu hwemamirioni e300 maawa ekubatana kubva gore rapfuura. Chirevo ichi chegore chinobatsira vatengesi veB1.2B kuenzanisa mashandiro avo neavo emaindasitiri avo uye kuona kuti ndedzipi tsika dzinotungamira mukubudirira kukuru. Muna 2, vatori vechikamu vakapedza avhareji yemaminetsi makumi mana nemaviri vachiona yega yega webinar, 2017 muzana inowedzera gore-pamusoro-gore
Chipiri, August 26, 2014 Chitatu, October 28, 2020 Jenn Lisak Golding
Wanga uchiziva here kuti, paavhareji, vatengesi veB2B vanoshandisa gumi nematatu nzira dzakasiyana dzekutengesa kumasangano avo? Ini handizive nezvako, asi izvo zvinondipa musoro kungofunga nezvazvo. Nekudaro, ini pandinonyatsofunga nezvazvo, isu tinobatsira vatengi vedu kuendesa nezve iwo akawanda matekisheni gore rega uye iyo nhamba iri kungokwira chete sezvo masvikiro achiwedzera kuzara. Sevashambadziri, tinofanirwa kukoshesa nguva uye nekwatinoenda